I-8 ebalulekile i-CISCO CCNA Training & Cisco Izitifiketi
CISCO CCNA Training & Cisco Izitifiketi
I-1. I-IPv6 Boot Camp Training
Izilaleli ze-IPV6 Boot Camp Target:
Izinhloso zezinhlelo ze-IPV6 Boot Camp
Izidingo ezidingekayo ze-IPv6 Boot Camp:
I-2. Qalisa i-Cisco Multicast v2.0
Sisebenzise izinhloso ze-Cisco Multicast V2.0:
Phunyelela i-Cisco Multicast v2.0 Essentials:
I-3. I-CISCO UCS
I-4. Ukukhishwa kwe-CISCO CCNP nokushintsha
Izidingo ze-CISCO CCNP zokuhamba nokushintsha:
I-5. I-CISCO CCNA Ukuhamba Nokushintshwa
I-6. I-CCNA Voice
I-CCNA Imfuneko Yezwi:
I-7. I-CCNA Troubleshooting - I-CCNP TSHOOT
I-8. I-CISCO CCNA Training Training
I-CISCO CCNA Imisebenzi Yokuqeqesha Ukuphepha:
I-Cisco CCNA yiyona iphayona eliphelele ku-IT elisiza izinhlangano ukuba zithathe amathuba okuba kusasa ngokubonisa ukuthi lezo zinto ezimangalisa zingenzeka uma ukhonjiswa ngaphambilini kusengaphambili.
Emakhasimende eCisco aqala izinto futhi ingxenye ebalulekile ye-DNA yethu yenza izinhlangano zamakhasimende ezihlala njalo futhi zisebenze nazo ukuze ziqaphele izidingo zazo futhi zinike amalungiselelo okuqinisa ukuchuma kwabo.
Umqondo wamalungiselelo ozobhekana nokubhekana nezinselele ezithile zeklayenti kuye kwaba neCisco kusukela ekuqalisweni kwawo. Umbhangqwana u-Len Bosack noSandy Lerner, bobabili basebenzela iStanford University, kwakudingeka baxhunyane nge-imeyli ezindaweni zabo ezihlukene ezikhona ezakhiweni ezahlukene kodwa okwakungenako ngenxa yokuntuleka okuncane.
Imishini emisha kumele ihlelwe ukuphatha indawo ehlukeneyo; futhi ngenxa yokuvulwa kokuhlolwa kwabo - inkinobho yomhlangano eminingi yamuzwa.
Ezinye zeCisco CCNA Training Course & Certifications zibalulwe ngezansi:
Umdwebo Isingeniso se-IPv6 Bootcamp (IPv6) I-Cisco Training on Demand course ihlose ukusiza abangaphansi kwamanje abajwayele i-IPv4 abakulindele futhi bajikeleze ukuze baqonde ukuhlukaniswa nge-IPv6 eniyilindele nokuyihambisa.
Le nkambo iqala ngokucacisa i-IPv6 ehlose ukwakha, kanye neminye imihlangano emisha ku-IPv6 efaka ikheli le-Address Resolution Protocol (ARP) ne-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, isibonelo, IPv6 Omakhelwane Discovery Protocol (NDP).
Izinhlobo ezihlukahlukene zezindawo ze-IPv6 zihlolwe ngomgomo ongathola ukuthi ungabona kanjani umehluko phakathi kwe-IPv6 multicast, isikhombimsebenzisi esiseduze, namakheli we-unicast.
Ngesikhathi esidlule, lezi zimodemu ziyazi ukuthi izimpendulo ze-IPv6 zifika kumarekhodi kanye nokuhamba okuyisisekelo nge-Routing Information Protocol (RIP) ye-IPv6 (RIPng) ne-Open Shortest Path First First (OSPF) ye-IPv6 (OSPFv3).
Le nkambo ihloselwe ochwepheshe abakhethekile abadinga ukuqonda okujulile kwe-IPv6.
Ngemva kokuqeda le nkambo, kufanele ube namandla oku:
Lungiselela i-IPv6 amakheli omhlaba wonke namasese ekukhoneni komshini
Hlola ukusebenza kwe-autoconfig nokuthi indlela ye-watchword ye-EUI-64 ithonya kanjani i-ID yesikhombimsebenzisi © 2016 Cisco kanye nama-offshoots.
Ukubikezela inhlangano ye-ID yokuxhumana yendawo yokuxhumana
Sebenzisa ukuxazulula izinkinga ukukhiqiza ukubona izitolo zokushintshwa nokudalulwa komakhelwane ngemuva kwe-IPv6 ping
Lungiselela i-OSPFv3 esebenzisa izindawo eziningi, isibonelo, izindawo ezigciniwe kanye nezindawo ezingabonakali kakhulu (NSSA)
Lungiselela omakhelwane be-OSPF ngenqwaba ye-non-broadcast bafinyelele ku-NBMA ukudluliswa kohlaka
Lungiselela i-RIPng ye-IPv6
Yenza ukwabelana nge-bidirectional ku-OSPFv3 ku-RIPng
I-IPV6 Boot CampIzidingo ezidingekayo:
Ngaphambi kokuthatha le nkambo, kufanele ube namandla okukwenza lokhu okulandelayo:
Chaza ukuhlela izinto eziyisisekelo bese wakha ama-LAN aqondile
Misa ukutholakala kwe-intanethi
Yiba nesitifiketi se-CCNA®, noma i-proportionate
Lungiselela, skrini, uphinde uhlole i-RIP, i-Enhanced IGRP (EIGRP), ne-OSPF
Chaza umklamo we-IPv4
Chaza i-Internet Control Message Protocol (ICMP) ne-ARP
Inkambo ye-Cisco Multicast (MCAST) ye-V2.0 yinkambo yezinsuku eziyisihlanu yomqeqeshi we-driver ehlanganisa izinto ezibalulekile ze-IP ehlukahlukene, efaka izicelo eziningi, imithombo, abamukeli, ukuphathwa okuhlangene, nemihlangano emikhulu ye-IP, (isibonelo, i-Protocol Independent Multicast, I-PIM) esetshenziswa ngaphakathi endaweni yokulawulwa yodwa (intradomain). Izingqinamba zokushintshaniswa kwezimo ze-LAN kanye nokuhlanganiswa okuqinile kwe-IP nazo zivikelekile.
Inkambo inikeza izimpendulo ezikhethekile zokuhlelwa okuqondile kwe-IP multicast ngaphakathi kumhlinzeki noma iklayenti ukuhlela. Izinhlelo zokufundisa zinikeza imithetho yokuklama nokuxazulula izinkinga zokusetshenziswa kwe-IP multicast ekushintsheni kwe-Cisco. Ama-laboratory anikezela ngezandla ezenzweni ezilindeleke ukuthi zithumele ngokuphumelelayo i-IP multicast.
Ngemva kokuqeda le nkambo, umfundi uzokwazi ukuhlangabezana nalezi zinhloso ezijwayelekile:
Imisebenzi ye-IP ye-multicast yamanje, ukuhlola imodeli ewusizo ye-IP ehlukahlukene kanye nokuthuthukiswa kokubonisa ku-multi-spectering IP, ukuqaphela izinzuzo ze-multicast ye-IP kanye nezinhlinzeko ezihlobene, futhi unqume izinhlobo ezahlukene zezicelo eziningi ezihlukahlukene ngenhloso ethile yokuphela ukuze uqonde imodeli ye-multicast ye-thetic andoretical izindawo ezingqimba ze-multicast kuya kolwazi lokuxhumanisa amakheli okungqimba, futhi i-rundown izinsimbi zokuvimbela imifudlana eminingi e-domain ye-LAN.
I-Protocol ye-Present Protocol Independent Multicast ngokwanele imodi (PIM-SM) njengemikhawulo ehamba phambili yokuvumelanisa imiyalezo ye-multicast ye-IP ukuze ithathe izindinganiso zokusebenza komhlangano nezici ezicashile, thola ukhululekile nge-determinism ehlanganiswe nemibono ye-multicast ye-scanty, futhi uhlele futhi uthumele i-PIM- I-SM enhlobonhlobo ye-IP multicast ihlela izinhlangano.
Ulwazi nolwazi okufanele umfundi abe nalo ngaphambi kokuya kule nkambo kufana nalokhu okulandelayo:
Isitifiketi se-Cisco Certified Network Associate (CCNA).
Sebenzisa amandla okuqonda nokulungiswa kwamashintshi e-Cisco kanye nezinguquko ze-LAN.
Ukusebenzisa ukuhamba kwe-Cisco IP (ROUTE).
Isikhungo se-Cisco Data Center Unified Computing Support Specialist senzelwe ukuhlola ulwazi lomfundi ngezinto eziyisisekelo ze-Cisco Unified Computing System kanye nokukwazi ukuqhuba imvelo yemvelo yedatha. Uchwepheshe weCisco Data Center U-Unified Computing Support ochwepheshe bezobuchwepheshe nabo bayohlolwa ngalezi zingxenye:
Ukuqinisekisa ukuthi i-Cisco Unified Computing System B neC Series Series
I-Cisco Unified Computing System kuhlelo lokusekela ipulazi lokuhamba ngepulazi nokuguqula
Ukusika umkhawulo wezinhlobo ze-Cisco Nexus umndeni.
I-Cisco Certified Network Professional (CCNP) Ukuthumela isitifiketi nokushintshwa kuvumela amandla okuhlela, ukuvuselela, ukuqinisekisa nokuphenya amanethiwekhi okuvakasha okungena endaweni kanye nokusebenza ngokubambisana neziphathimandla ekunqumeni ukuphepha kwekhasi, amazwi, ama-remote and video amalungiselelo.
I-CCNP Ukuthutha nokufaka isitifikedi sokushintsha kufanelekile kulabo abangaphansi konyaka owodwa wokuhlangana kwezinhlelo zokuphatha futhi abazimisele ukuthuthukisa amandla abo futhi basebenze ngokuzimela ezindaweni eziyinkimbinkimbi.
Abantu abaye bafeza i-CCNP Routing and Switching baye babonisa amakhono adingekayo ezingxenyeni ezinkulu zebhizinisi, ngokwesibonelo, ukuhlela ukuklama, ukwakheka kwe-bolster, umklami womklami noma isazi sesistimu.
Ulwazi lokuguqula nokushintsha komhlangano kusuka kule setifiketi luzokwakhiwa ukusungulwa njengoba lezi zici zihambisana ngokufanayo kumanethiwekhi angokwenyama yanamuhla futhi i-virtualized ihlela izinto zangomuso.
I-Cisco enkulu yeCisco i-Routing and Switching certification noma i-Cisco CCIE isitifiketi ingahamba njengento ebalulekile.
Njengoba i-Enterprises ihambela kumamodeli asekelwe kulawulwayo, ingxenye nengqondo edingekayo yocwaningo lobuchwepheshe besikhungo luya phambili futhi luyisisekelo kunanoma yisiphi esinye isikhathi inkumbulo yakamuva.
Ukuze uhlele lolu hlelo ukuhambisa, i-CCNA Ukuhamba nokuqinisekisa isitifiketi ngeke nje ikusethe ngokufunda ngezinyathelo zokusekela, nokho isiqinisekiso sokuthi uhlala uhambisana nezilungiselelo zokufaneleka ezidingekayo ukuze kube nokuhlelwa kwezintambo ezintsha.
I-Cisco Certified Network Associate Voice (i-CCNA Voice) ivumela ukuthi ilandise ulwazi lwezinga kanye nemikhuba edingekayo yokulawula ukuhlelwa kwezwi. I-Cisco CCNA Voice isitifiketi iqinisekisa ukuthi ikhono elidingekayo lisekelwe izingxenye ezithile zomsebenzi ekuthuthukisweni kwezwi, isibonelo, ikhanda lenqubekela phambili yezwi, isazi sezwi, nomqondisi wezwi. I
Ivumela ukufaneleka kwamakhompiyutha we-VoIP, isibonelo, i-IP PBX, ukuxhumana kwe-IP, i-handset, ukulawula ucingo, nokuhlelwa komlayezo wefoni.
I-CCNA Voice isitifiketi zokuhlola izindlela kanye nokwaziswa okuboniswe Cisco Unified Manager Manager. Ngokuvamile isebenzisa izinhlangano ezinkulu, isibonelo, ohulumeni, izinhlangano ezinkulu, kanye namayunivesithi.
Ngaphezu kwalokho, amakhono okuhlola kanye nokufunda kwe-CCNA Voice Certification ekhonjiswe neCisco CallManager Express (CME) kanye namalungiselelo e-Cisco Unity Express (CUE) asetshenziswe njalo yizinhlangano eziphakathi nezincane, isibonelo, izinhlangano ezingaphansi kwabameleli be-2,000, izinhlangano zokudayisa kanye nesincane esikoleni izifunda.
Noma iyiphi i-Cisco CCENT enkulu, i-CCNA Ukuhamba nokushintsha noma isitifiketi se-Cisco CCIE ingahamba njengento ebalulekile.
Lokhu kuhlolwa kuqinisekisa ukuthi ithemba elinenzuzo linokufunda nokufaneleka okubalulekile:
Hlela futhi wenze ukugcinwa okujwayelekile kwizinhlelo eziyinkimbinkimbi ezenzeke futhi zishintshane amanethiwekhi
Sebenzisa imikhuba emisha esekelwe futhi indlela ejwayelekile ye-ITIL yokubhekana nokuhlela ukuxazulula izinkinga
Inkambo ehambisana nalokhu ukuqeqeshwa okuphakanyisiwe kwalokhu kuhlolwa.
Ukuxazulula izinkinga nokulondoloza i-Cisco IP Networks (TSHOOT)
I-Cisco Certified Network Associate Security (i-CCNA Security) ivumela ukuthi ilandise ukufunda kwezinga nokufaneleka okudingekayo ukuvikela amanethiwekhi we-Cisco.
Ngesitifiketi se-CCNA Security, ukuqeqeshwa komsebenzi kubonisa ukufaneleka okudingekayo ukwakha uhlaka lwezokuphepha, ukubona izingozi nokukhubazeka kumanethiwekhi, kanye nezingozi zokuphepha ezilinganisiwe.
Amamojula we-CCNA Security Education akhuthaza izinkampani zokuphepha emphakathini, ukusungulwa, ukuxazululwa nokuxazulula imishini yamasu ukubuka ubuqotho, ukufihla nokufinyeleleka kwemininingwane kanye namagajethi, kanye nokufaneleka ekuthuthukiseni ukuthi iCisco isebenzisa njengengxenye yesakhiwo sayo sokuphepha.
Noma yikuphi okusemthethweni i-Cisco CCENT, i-CCNA Ukuhamba nokushintshwa, noma yisiphi isitifiketi se-CCIE singahamba njengento ebalulekile.
Indlela ephumelela kakhulu yokunciphisa izinga lokunciphisa kwisayithi lakho le-WordPress
I-3 IBM Training Course Wonke Umuntu Embonini Kufanele Asebenzise